Mogadishu Journal » Shirkii baarlamaanka Africa oo lagu soo gabagabeeyay dalka K/africa
Shirkii baarlamaanka Africa oo lagu soo gabagabeeyay dalka K/africa
Mjournal :–Shirka Baarlamaanka Afrika oo maalmahan ka socday K/Afrika ayaa maanta lagu soo gabagabeeyay magaalada Johannseburg, waxaana Soomaaliya u matalayay Xoghayaha Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya, Mudane C/kariim Xaaji Cabdi Buux.
Shirkan ayaa intii uu socday waxaa inta badan looga doodaayay heshiis dhawaan Dowladaha Afrika isla gaareen, kaasoo ahaa in waddamada qaaraddu ay hal baasaboor yeeshaan iyo inay xudduudaha intooda badan isku furaan.
C/kariim Xaaji Cabdi Buux, oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in in shirkaan ay Soomaaliya kaga qeyb qaadaneyso sidii ay qeyb uga ahaan laheyd heshiisyada iyo sharciyada guud ee midowga Afrika isagoo intaa raaciyay in Soomaaliya ay waxbadan ka faa”ideysan karto.
“kulankaan xoghayayaashu waxay isku weydaarsanayaan sidii ay qeyb uga ahaan lahaayeen heshiisyada heerka caalami ah ee ay Dowladuhu kala saxiixdeen”ayuu yiri Xoghaye Buux.
Sidoo kale waxaa Kulanka labada cisho ka socday Johannsenburg ,ayaa lagu falanqeeyay sidii loo yareeyn lahaa musaqmaasuqa Qaaradda ragaadiyay iyo shaqa la’aanta sababtay gaajada,iyadoo laysla soo qaaday sidii ay Afrika ugu dedaali lahayd wax soorka si shaqa abuur loogu sameeyo dhallinyarada.
Xildhibaan Cabdow Sakiye oo ka socday dalka Jabuuti kana qeybgalayay shirka,ayaa sheegay in ka Jabuuti ahaan ay aad ugu dedaaleen sidii ay u yareeyn lahaayeen musuq-maasuqa, ayna u xilsaareen ka hortagiisa hay’ado arrintaasi ku shaqa leh.
Barlamaanka Afrika oo ay xaruntiisu tahay magaalada Johannsenburg ee K/Afrika, ayaa waxaa sanadkiiba afar jeer lagu qabtaa shir ay yeeshaan Xildhibaano ka kooban Qaaradda waxaana wadan walba u matala shan Mudane iyadoo Soomaaliya ay xubin ka tahay Waddamadaas.
Obama oo cafiskii ugu ballaarnaa u fidiyay maxaabiis
Nin Soomaali ah oo dil loo xaray kaddib weerar ka dhacay bartamaha magaalada London